All nke mara mma bụ anya site Express 'na-emesapụ aka Vista windo ọ bụla njem ụgbọ ala. The njem culminates na Bernina Pass. na 7,000 ụkwụ elu oké osimiri, ngafe bụ ewekarị dajụọ snowstorms. Ka ọ dịgodị, anwụ na-acha Italy na-echere gị na na nsọtụ ọzọ nke a na njem. Nke a mara mma agbaga ụgbọ okporo ígwè kwesịrị amanyere bụ iwu na ọ bụla ụgbọ okporo ígwè n'anya si ịwụ ndepụta.
Ka ọ dịgodị, n'isonyere Express na na ndepụta na-na DB ma ọ bụ Deutsche Bahn. Germany si mba ụgbọ okporo ígwè netwọk awade ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị mara mma agbaga agafe nso River Rhine. Ya ụzọ gasị ga-ewe gị site na-egbu echiche nke Alps na ugwu na ndagwurugwu. Dị ka ọmụmaatụ, ụzọ kasị mma inye ekele Europe fọdụrụ n'ezinụlọ osimiri bụ site ụzọ na-ejikọ ndị obodo nke Mainz na Cologne. Nke a ụzọ na-ewe gị site nwayọọ ugwu nta, ntisa castles, na ogologo ubi vaịn.
Ọ dịghị okwu nke na-adọrọ mmasị ụgbọ okporo ígwè njem ga-ezu na-enweghị gụnyere Trans-Siberia Express. Makwaara dị ka fọdụrụ n'ezinụlọ ụgbọ okporo ígwè na njem na mbara ala, Trans-Siberia Express ejikọ Moscow dị n'ebe ọdịda anyanwụ Russia na ala gbara osimiri okirikiri obodo nke Vladivostok na Eastern Russian. N'ụzọ, na ụgbọ okporo ígwè alaka n'ime nso mba ndị dị ka China, Mongolia, na North Korea. Ọtụtụ ebe na Western Europe, tinyere Amsterdam, nwere n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na-enye agafe na Trans-Siberia ojii na St. Petersburg, Russia. Sịkwa ihe mere ọtụtụ ndị Europe ịhọrọ ime ụgbọ okporo ígwè ahụ mgbe ahapụla ọwụwa anyanwụ.
Nke a bụ ihe ọzọ na-adọrọ mmasị ma na--eleghara anya nke ụgbọ okporo ígwè njem. n'ezie, ọ dịghị ihe dị ka ndị na ahụmahụ ị ga-ezute n'ụzọ. Jikere izute ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị adọrọ mmasị ndị mmadụ si n'akụkụ nile nke ụwa. Bụla cross-mba ụgbọ okporo ígwè na njem ị na na na, i nwere ike ejedebe na-achọta a enyi ma ọ bụ abụọ n'etiti ibe n'otu ntabi anya ndị njem. Ma ị na-na-ewere sinik Bernina Express, -agafe ọtụtụ mba na ma na Deutsche Bahn ma ọ bụ ndị Trans-Siberia Express, ma ọ bụ atụrụ ndụ na Switzerland si glasia Express, nke The Culture Njem kọwara dị ka a na njem na-azọ ndị nlegharị anya nke Bernina, na-aga site na ụgbọ okporo ígwè na-aghaghị ịbụ otu n'ime ndị kasị adọrọ mmasị ahụmahụ nke ndụ gị.
To get the best train experience in your life, na ndị dị ọnụ ala ahịa na napụla asọ anyị oyi ntinye akwụkwọ ụgwọ, were Save A Train!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/fascinating-train-travel-europe/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)